Home » Lahatsoratra farany farany » fivoriana » IMEX America Launch: Hery vaovao sy Firaisankina
Ary niala izahay - Andro 1 IMEX America.
Naneho tanjaka tamin'ny isa ny vondrom-piarahamonina hetsika ara-barotra manerantany, nivory tao amin'ny IMEX America, izay nisokatra androany tao Las Vegas. Mpividy eran-tany maherin'ny 3,300 sy orinasa fampirantiana maherin'ny 2,250 no nisoratra anarana hanatrika ny seho, natao ny 9 - 11 Novambra tao amin'ny Helodranon'i Mandalay, ary natao hanokatra ny lalana ho amin'ny fanavaozana ny indostria.
Ny IMEX America dia dingana lehibe ho an'ny indostrian'ny fivoriana izay hetsika iraisam-pirenena voalohany nisokatra taorian'ny fanafoanana ny fandrarana ny fitsangatsanganana amerikana.
Ny hetsika amin'ity taona ity dia manamarika ny folo taona nahitana fahombiazana ary voalohany tao anatin'ny 2 taona mahery taorian'ny areti-mifindra.
Ny hetsika dia atao ao amin'ny tranony vaovao ao amin'ny Mandalay Bay any Las Vegas, Nevada, manomboka anio ka hatramin'ny 11 Novambra.
Amin'ity taona ity IMEX Amerranomandry, ny seho voalohany tao anatin'ny roa taona mahery, dia dingana lehibe ho an'ny sehatra ho hetsika iraisam-pirenena voalohany nisokatra taorian'ny fanafoanana ny fandraràna fitsangatsanganana amerikana. Manana trano vaovao ihany koa ny fampisehoana, Mandalay Bay, ary mankalaza ny andiany faha-10, ka mahatonga ny andro vitsivitsy manaraka any Las Vegas ho fotoana manokana.
Ny fanaovana raharaham-barotra no ivon'ny fampisehoana ary amin'ity taona ity dia tsy misy afa-tsy ny roa ampahatelon'ny fanendrena efa misy natao ho an'ny tanjona fikarohana na hifanakalozan-kevitra momba ny hetsika iray manokana - famantarana mazava fa ny mpividy dia manomana mialoha amin'ny fikasana hanomboka orinasa ary maso amin'ny 2022 sy any aoriana.
Amin'ny mariky ny fahatokisana hafa ho an'ny sehatra, ireo orinasa 2,250+ fampirantiana dia manana fatratra eran'izao tontolo izao, manerana ny firenena 200 mahery misy solontena avy any Eoropa, Amerika Latina ary Azia mipetraka eo anilan'i Amerika Avaratra manerana ny gorodona (400,000 metatra toradroa!) .
Of the miverina fampirantiana, 16% no nampiasa vola tamin'ny fanatrehana lehibe kokoa tamin'ny fampisehoana - ny sasany, anisan'izany ny Baltimore, EventsAir, Boise ary St Louis, dia nampitombo 100% na mihoatra noho ny fampisehoana teo aloha tamin'ny taona 2019.
Tongasoa eto amin'ny IMEX America.
Amin'ity taona ity ny fampisehoana dia mandray ireo fampirantiana vaovao avy amin'ny faritra, hotely ary sehatra teknolojia manomboka amin'ny A ka hatramin'ny (saika) Z ao anatin'izany: Amadeus River Cruises, Hopin, Louisiana, MeetingPlay, Minneapolis, Iberostar Hotel & Resorts ary VenuIQ. Ny Faritra Tech natokana ho an'ny fampisehoana no lehibe indrindra hatramin'izay, taratry ny fitomboan'ny fangatahana sy ny fampiasam-bola amin'ny teknolojia hetsika.
Carina Bauer, Tale Jeneralin'ny Vondrona IMEX, dia nilaza hoe: "Tamin'ny roa taona lasa izay no nanaovanay ny seho farany ary natombokay androany niaraka tamin'ny lisitry ny fampirantiana sy mpividy eran-tany, fivoriana fampianarana 200 mahery, miampy toerana vaovao. Ny filazana fa faly aho dia fanambaniana!
“Taorian'ny 10 taona, tena toy ny trano faharoa i Las Vegas, ary fantatro fa fihetseham-po izay hozarain'ny olona an'arivony ao amin'ny vondrom-piarahamoninay eto amin'ity herinandro ity. Ho antsika izay miaina sy miaina fivoriana, hetsika ary fitsangatsanganana famporisihana dia mahagaga ny mahita ny indostriantsika mipoitra amin'ny fiainana.
“Ankoatra ny isa, ny fanendrena ary ny fifanarahana ara-barotra, matoky aho fa hitodika amin'ity andiany faha-10 an'ny IMEX America ity ho toy ny teboka iray ho an'ny indostria. Ny nomerika sy ny hybrid dia manana ny toerany mazava tsara, saingy tsy misy maharesy an'io fahatsapana visceral io amin'ny maha-mpiara-miombon'antoka, mpividy ary mpamatsy avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao ary mahafantatra fa mitarika mivantana amin'ny famoronana asa, fampandrosoana matihanina, fandrosoan'ny indostria ary ny zava-dehibe indrindra amin'ny rehetra. , fiantraikany ara-toekarena tsara maneran-tany.”
Mitohy hatramin'ny 11 Novambra ny IMEX America.